Brezila: Tandindonin-doza Avy Amin’ny Doro Tanety Tsy Ara-dalàna Ny Valan-javaboarim-Pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jona 2017 5:57 GMT
Vakio amin'ny teny Português, 繁體中文, 简体中文, عربي, বাংলা, Français, English
(Marihina fa tamin'ny 11 Novambra 2008 np nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Tsy nitsahatra nirehitra tao anatin'ny iray volana ny Valan-javaboary Chapada Diamantina ao Bahia. Araka ny sampan-draharahan'ny tontolo iainana ao Brezila, may ny 50 isanjaton'ny 1.520 km² tamin'ny valan-javaboary , izany hoe ala mirefy 75.000 hektara (mitovitovy habe amin'ny tanandehiben'i New York ). Efa ho olona miisa 500, mpamono afo sy mpilasaka an-tsitrapo no namono ny afo vokatry ny doro tanety tsy ara-dalàna natomboky ny mpiompy nanadio ny faritra hanaovana hanim-biby. Oram-be vao mety hampitsahatra ny afo, kanefa tsy antenaina ny fisian'izany raha tsy any amin'ny faran'ny volana.
Manontany tena i Paulo Bicarato [pt] hoe nahoana ireo mpanao heloka bevava no tsy mbola tratra ihany raha fantatra ny antony nahatonga izany, ary tsy vao voalohany izao:
Toy ny hoe tsy misy olona mahalala izany. Raha fantatra ny antony mahatonga izany, dia azo lazaina fa misy ny olona miray tsikombakomba ao anatin'izany. Mampalahelo, tena mampalahelo ny mahita fa mitranga isan-taona ny toy izany .
Nanasongadina i Marilia Miller [pt] fa ela loatra ny fandraisana andraikitry ny manampahefana ankoatra ny olan'ny doro tanety niniana natao:
Tsy misy isalasalana fa ny zavatra tena manahirana antsika indrindra, dia ny fitavozavozan'ny manampahefana tompon'andraikitra amin'ny fanolorana fitaovana ho an'ireo ekipa mpilatsaka an-tsitrapo izay tsy mbola mahavita mamono ny afo noho ny tsy fahampian'ny fitaovana (olona sy famonoana afo) ary ny fampitaovana, toy ny fivezivezena sy ny sakafo. Tsy hita toy ny mahazatra ny Governemanta-panjakana, tsy miraharaha mihitsy ny zava-misy fa ny Chapada Diamantina no mpamatsy rano lehibe indrindra ao Bahia (80%-n'ny rano avy amin'ny fanjakana dia avy amin'ity faritra ity).
Nampiakam-peo ny bilaogy SuburbioEmFoco:
Nahoana no mangina? Nahoana no tsy miresaka izany ny fampitam-baovao lehibe ?
Nanontany i Zé Luiz Soares [pt] raha toa ka izao no fiafaran'ny paradisa;
Mitombina ve izany? Eny misy izany ao Brezila.
Tsy mbola tany Chapada aho. Kanefa nanonofy ny ho any aho nandritra ny taona maro, toy ny mitady ny paradisa any lavitra; izao no manjo ilay toerana izay anton-diako mahafinaritra indrindra any Brezila ; ny dia izay nokasaiko atao miaraka amin'ny kitapo am-babena , tsy misy tanjona mazava na toerana aleha. Toa nanjavona tao anatin'ny fitiavan-karena, ny tsy fahombiazana ary ny tsy fandraisana andraikitra ilay nofy.
Ny fandaharan'ny Tsitoha indray sisa no ianteherantsika.
Sary nalain'i William Kitzinger tamin'ny volana Jolay 2005 ary nampiasàna lisansa Creative Commons . Jereo ny Chapada Diamantina set.
Manan-karena diamondra sy volamena i Chapada Diamantina tamin'izany fotoana, saingy ny fizahantany maitso no mampiroborobo azy ankehitriny. Fahita matetika any amin'ny faritra ny afo kely noho ny vanin-taona maina sy ny hafanana mahery vaika, ary matetika mahasitrana ny tenany ny ala .Efa nisy ny afo lehibe tamin'ny taona 1998 sy 2003, saingy tsy voafehy ny zava-nitranga tamin'ity taona ity, ary mety ho rava mandrakizay ny hatsaran'ny Chapada raha toa ka tsy voavoly indray ny ala .